कैलाली, बाँके र रौतहटमा कफ्र्यू, २० दिनदेखि आन्दोलन जारी - NewsPolar NewsPolar
★ कमरेड शब्द मलाई असाध्यै मनपर्छः कमल थापा ★ एउटा यस्तो पास्नी ! ★ ओलीले मागे कृषिमन्त्रीको राजीनामा ★ राससका अध्यक्ष झालाई स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान ★ चुइगम पड्काएरै सके नेपालीले ४१ करोड ★ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री देउवा ★ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारीमा ★ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पूर्वतयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन ★ प्रधानसेनापतिद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण ★ सभामुख सापकोटा र अजरबैजानका सभामुख गफारोवाबीच भेटवार्ता
कैलाली, बाँके र रौतहटमा कफ्र्यू, २० दिनदेखि आन्दोलन जारी
८ भाद्र २०७२, मंगलवार ०५:०१
काठमाडौं, भदौ ८ । संघीयताको सिमाङ्कनको विषयमा कैलाली–कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा २० दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न जिल्लामा कफ्र्यूृ र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
सोमवार ७ प्रहरीसहित ८ जनाको ज्यान गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले टीकापुर नगरपालिकासहित ६ गाविसमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ । कैलाली–कञ्चनपुरमा आन्दोलन शुरु भएको २० दिन पूरा भएको छ ।
प्रशासनले सोमवारदेखि दुर्गौली, जोशीपुर, नारायणपुर, धनसिंहपुर, मुनुवा र पत्थरैयामा कफ्र्यु आदेश जारी गरेको हो । सोमवार कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलकारीको आक्रमणबाट सात सुरक्षाकर्मीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा नेपाल प्रहरीका १७ जना र सशस्त्र प्रहरीका २२ जना घाइते भएको र घाइते मध्ये ७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइतेहरुलाई उपचार गर्न नेपालगञ्ज र काठमाडौं ल्याइएको छ । घटनामा ४ जना आक्रमणकारी पनि घाइते भएका थिए ।
बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा पनि कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको छ । राँझादेखि जमुनाहासम्म, फुल्टेक्रादेखि नन्दनी मिलसम्मको क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु जारी गरेको हो । आन्दोलनका कारण बाँकेमा लगातार १४ दिनदेखि बन्द छ ।
रौतहट सदरमुकाम गौरमा पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यू आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक अराजक बन्दै गएपछि बाध्य भएर प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपरेको र हिजो अपरान्ह साढे ४ बजेदेखि आज विहान ५ बजे सम्मका लागि कर्फयु आदेश जारी गरेको बताए ।
नवलपरासीमा पनि सदरमुकाम परासीदेखि बर्दघाट नगरपालिकाको पञ्चनगर भूताहादेखि राजमार्गहुँदै सुनवलसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । रामग्राम नगरपालिकाका सबै वडा, पूर्व पश्चिम लोकमार्गको पूर्वमा पञ्चनगर– भूताहादेखी पश्चिममा सुनवल चोकसम्मको १२ कि.मी. दुरीलाई निषेधाज्ञा क्षेत्र तोकिएको छ । निषेधाज्ञा १३ गतेसम्म लागू हुने प्रशासनको सूचनामा जनाइएको छ ।
जिल्लालाई विभाजित गरेको भन्दै एकीकृत रुकुम संघर्ष समितिले आन्दोलनमा जारी राखेको छ । समितिले सिंगो रुकुमलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्न संविधानसभालाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसमेत दिएको छ ।
चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराइलाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै १३ दिनदेखि नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ लगायतका जिल्लामा पनि प्रदर्शन जारी छ । यस्तै मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको मधेश बन्दबाट मध्य तराइका आठ जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । सप्तरीका राजविराज, भारदह, रुपडी, कुसवा, कञ्चनपुर, कल्याणपुरलगायतका स्थानमा प्रदर्शन जारी छ ।